गूगल डुओले एन्ड्रोइड टिभीमा सपोर्ट गर्ने, अब ठूलो स्क्रिनबाट पनि भिडियो कल गर्न सकिने - Technology Khabar
» गूगल डुओले एन्ड्रोइड टिभीमा सपोर्ट गर्ने, अब ठूलो स्क्रिनबाट पनि भिडियो कल गर्न सकिने
गूगल डुओ चाँडै नै एन्ड्रोइड टिभीमा उपलब्ध हुनेछ। कम्पनीले यसको लागि बीटा संस्करणमा परीक्षण गर्दैछ।
एन्ड्रोइड टिभीमा नयाँ अपडेट पछि प्रयोगकर्ताहरूले गूगल डुओ अनुप्रयोगको सहयोगमा उनीहरूको स्मार्ट टिभीबाट भिडियो कल गर्न सक्षम हुनेछन्। गूगल क्रोमकास्टमा गूगल मिटको सपोर्ट पहिले नै रहेको छ।
गूगलले आफ्नो ब्लगमा यस बारे जानकारी दिँदै, गुगलले भने कि किन ठूला स्क्रीनहरु केवल बैठकहरूको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने ? यो साथी र परिवारका भिडियो कलिंगको लागि पनि प्रयोग गर्नुपर्दछ। गूगलले आफ्नो ब्लगमा जून स्क्रीनशट प्रयोग गरेको छ त्यसमा पनि डुओ लोगो देखिन्छ।
कसरी भिडियो कल गर्न सक्नुहुन्छ ?
गूगल डुओ अनुप्रयोगको सहयोगमा प्रयोगकर्ताहरूले एन्ड्रोइड टिभी मार्फत समूहमा वा एक देखि एक भिडियो कल गर्न सक्षम हुनेछन्। यदि टिभीमा क्यामरा छैन भने, तपाईं टिभीबाट भिडियो कलिङ्गको लागि युएसबी क्यामरा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
नयाँ नाम राख्दै
यो विश्वास गरिएको छ कि गूगलले गूगल डुओलाई गूगल मीटको साथ बदल्न सक्दछ। जुन पछि नयाँ अनुप्रयोगको नाम डुएट ‘Duet’ (डुओ+मीट) हुनसक्नेछ।
गूगलले केही दिन अघि गूगल डुओको वेब संस्करणमा एकै साथ ३२ व्यक्तिलाई भिडियो कलिङ्ग वा भिडियो कन्फरेन्स गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरेको छ। कम्पनीले गूगल डुओमा फ्यामिली मोड पनि ल्याएको छ।
गूगल मीटले हालसालै क्रोमकास्ट सपोर्ट पनि जारी गरेको छ, जसमार्फत प्रयोगकर्ताहरूले आफ्ना लेक्चरहरू र बैठकहरू ठूलो पर्दामा स्ट्रिम गर्न सक्दछन्। यो सुविधा क्रोमकास्ट, क्रोमकास्ट अल्ट्रा र दोस्रो जेनरेशन क्रोमकास्ट उपकरणहरूको साथ काम गर्दछ। एजेन्सीका साथ